Corel Draw [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ( Engineering အပါအ၀င်) > Graphic Design > Corel > Corel Draw
Corel Draw နဲ့ design တော့ဆွဲဖူးပါတယ်
Core Draw နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှပြောကြဘူးလား
ပြောမယ်ဆိုတောင် ဘယ်tools ကဘာလုပ်လဲပြောနိုင်မှာ
ဘယ်သူမှ ပြောမယ့်သူမရှိရင်တော့ ;D
ကျွန်တော်သင်းတန်း တက်တုန်းက တော့ Core Draw ကို ဖိတ်စာရိုက် တာတို. logo worksheet တွေ.လုပ်တာတွေ.ပဲသင်ဘူးတယ်။ အခြားဘယ်တွေ.များ သုံးသေးလဲမသိဘူး Core Draw ဒီဆိုင်းအခွေတွေ.ကတော့များတယ်နော်။ သိတဲလူများရှိရင်ဆက်ပြောပါဦး။
ကြည့်နေတာ ကြာပြီဇေရေ ဘယ် သူမှ ပြောမယ့် သူမရှိရင် မိုးပြေးတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးကြမလား
မိုးပြေးလဲ မသုံးတာ နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာနေပြီ မနည်းစဉ်းစားပြီးပြောရမှာ မိုပြေးတစ်ယောက်တည်းဆို မရဘူး
ဇေပါ ကူညီဆွေးနွေးမယ်ဆို စလိုက်ကြရအောင် သဘောတူလားဇေ
Corel Draw ကိုတော့ သုံးနှစ်လောက် သုံးဖူးပါတယ်... Version9ကစပြီး သုံးဖူးပါတယ်... အခု Corel x4 ကိုတော့ မသုံးရသေးပါဘူး...x3 အထိတော့ သုံးဖူးပါတယ်... Corel နဲ့Illustrator က အသုံးပြု ပုံချင်းသာ ကွာသွားတာပါ... လုပ်လို့ရတာတွေကတော့ အတူတူပါပဲ... စိတ်ဝင်းစားတဲ့သူ ရှိရင်တော့ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါ့မယ်...
စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဆက်ပြောပေးပါဦး၊ ကျွန်တော်က Graphic နဲ့ပါတ်သက်တာ ဘာမဆိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် ;Dဘာမှလဲမတတ်လို့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောပေးပါနော် :P
အင်း... ကြည့်ရတာ Corel ကို အသုံးနည်းတယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်က Vector အတွက် ပုံဆွဲရင် Corel နဲ့ပဲကိုင်တယ်ဗျ။(ဒါပဲတတ်လို့) Illustrator ကိုတော့ အမြည်းလောက်ပဲသုံးဖူးတယ်။
ကိုဇေနဲ့ ကိုမိုးပြေးတို့ စဆွေးနွေးပေးလေ။ ကျွန်တော်က လူပျိုလေးမို့လို့လားမသိဘူး မစတတ်လို့ ဟ... ဟ....(ကြုံလို့ပါ)
Corel Draw နဲ့ပတ်သက်ပြီး အတော်များများ ဆွဲဖူးပါတယ် အရမ်းလဲဆွဲလို့ကောင်းပါတယ် ကျွန်တော် corel drew နဲ့ design ဆွဲတာ အခုဆိုရင် 6နှစ်ရှိပါပြီ အရမ်းလဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်။
Corel DRAW Graphics Suite X5 15.0.0.489 Final FULL VERSION | 510 Mb